Iyo nyowani yeApple Watch Series 3 zvakare yeiyi 2017 | Ndinobva mac
Runyerekupe nezve kuburitswa kwe itsva Apple Watch Series 3 ivo vanotanga kusvika kunetiweki. Hazvisi pachena kana iyi modhi nyowani yaizovhurwa nguva pfupi yapfuura iyo iPhone, ndiko kuti pakupera kwaGunyana kana kuti zvinogona kutora nguva yakati rebei, asi tichifunga kuti izvozvi mamodheru Series 1 uye Series 2 zvakatangwa munaGunyana. yakavandudzwa modhi yaizosvikawo mumwedzi iwoyo.
Pamusoro pezvekuwedzera makuhwa pamusoro peiyo nyowani iPhone 8 kana "yegumi yegumi", iyo Apple Watch yaizovandudzwa pamwe neshanduko dzakakosha senge yepamusoro processor kumhanya, zvishoma kuzvitonga uye chidzitiro chitsva kana girazi rakagadzirwa nemumwe mutengesi.
Pamwechete, shanduko yemutengesi kana kuwedzerwa kwekumabvazuva kunenge kuri nekuda kwekuti izvozvi zvave kuve nematambudziko ekupa izvo zveCupertino uye ndosaka TPK Kubata ichizoona rubatsiro mukugadzirwa kwemapaneli munguva pfupi. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve kambani yekambani yeHong-Kon inonzi Biel Crystal Manufactory uye imwe kubva kuTaiwan, General Chinongedzo Solution.
Muchokwadi runyerekupe harutaure zvakanyanya nezve zvakatemwa kana zvakasarudzika zvemhando inotevera, asi zvinotarisirwa kuti kunatsiridzwa uku kuchaitwa mukati mukati uye izvi zvinotimanikidza kufunga kuti Apple ichatsungirira dhizaini yechigadzirwa cheimwe gore. Ichokwadi kuti chakanyanyisa kutanga kutaura nezveApple Watch Series 3, asi mafambiro ekutora mascreen uye zvinhu aripo izvozvi pahurongwa hwezuva reApple, saka hazvishamise kuti vanoonekwa pane network saka munguva pfupi. Tichaona kana ichiverengerwa Kubatana kwe3G kana zvinokwanisika kupfuudza kuzvimiririra kwemhando yezvino izvo zvatove zvakanaka kunyatso kufunga izvo izvo wachi inotipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo nyowani Apple Watch Series 3 zvakare yeiyi 2017
MacOS Sierra 3 yeruzhinji beta 10.12.4 yave kuwanikwa